स्वीडेन र इङ्ल्यान्ड विजयीभएसँगै क्वार्टरफाइनल समीकरण पूरा, अब को- को भिड्‍दैछन् ? – Online National Network
स्वीडेन र इङ्ल्यान्ड विजयीभएसँगै क्वार्टरफाइनल समीकरण पूरा, अब को- को भिड्‍दैछन् ?
२० असार २०७५, बुधबार ०२:४४
काठमाडौं, २० असार — रसीयामा जारी विश्वकप फुटबलको क्‍वार्टरफाइनल समीकरण पुरा भएको छ । मंगलबार रातिको खेलमा स्वीडेन र इङ्ल्यान्ड विजयी भएसँगै विश्वकपको क्‍वार्टरफाइनल समीकरण पुरा भएको हो। रसीयामा जारी २१ औं संकरणको विश्वकपमा फ्रान्स, उरुग्वे, रुस, क्रोएसिया, ब्राजिल, बेल्जियम, स्विडेन र इंग्ल्यान्डले अन्तिम आठमा स्थान पक्का गरेका छन् ।
यो विश्वकपमा ठुला राष्ट्र अर्जेन्टिना, पोर्चुगल, स्पेन, डेनमार्क, मेक्सिको, जापान, स्विजरल्याण्ड र कोलम्बियाले अन्तिम आठको यात्रा गर्न सकेनन् ।
विश्वकपको क्वाटरफाइनल खेलहरु असार २२ (शुक्रबार) बाट सुरु हुनेछ । पहिलो दिन दुई क्वाटरफाइनल खेल हुनेछ । यस्तै दोस्रो दिन पनि दुई खेल नै हुनेछ।
पहिलो क्वाटरफाइनलमा उरुग्वे र फ्रान्सले प्रतिस्पर्धा गर्ने छन्। दुई टोलीबीचको खेल नेपाली समय अनुसार साँझ ७:४५ मा सुरु हुनेछ। शुक्रबार नै दोस्रो क्वाटरफाइनल खेल हुनेछ । जसमा ब्राजिल र बेल्जियम खेल्ने छन् । ब्राजिल र बेल्जियमबीचको खेल राति ११:४५ मा सुरु हुनेछ।
यस्तै तेस्रो र चौथो क्वाटरफाइनल खेल असार २३ गते हुनेछ । तेस्रो क्वाटरफाइनलमा स्विडेन र इंग्ल्यान्डले खेल्ने छन् । स्विडेन र इंग्ल्यान्डबीचको खेल नेपाली समय अनुसार साँझ ७:४५ मा सुरु हुनेछ ।
विश्वकपको चौथो तथा अन्तिम क्वाटरफाइनलमा आयोजक रुस र क्रोएसियाले खेल्ने छ । रुस र क्रोएसियाबीचको खेल नेपाली समय अनुसार राति ११:४५ मा हुनेछ ।
क्वार्टरफाइनलमा पाँच पटकको विजेता ब्राजिल, दुई पटकको विजेता युरुग्वे, एक पटकको विजेता फ्रान्स र एक पटकको विजेता इंगल्याण्ड पुगेका छन् । चार पूर्व विजेता र चार उपाधि जित्न नसकेका टिमबीचको भिडन्त कस्तो होला त ? भन्ने रोचकता बढेको छ ।